YEYINTNGE(CANADA): Monday, August 22
နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှသည် ငြိမ်းချမ်းရေးမုဒ်ဦးဆီသို့ 
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ရုပ်သေးသမတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက စစ်အစိုးရထက် လူထုပါးစပ်ဖျား သတင်းတွေ ထွက်လာသည် ။ အဓိကမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နင့် တွေ့ ဆုံသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံရှေ့မှာ ရိုက်ပြထားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်ဟု စောဒကတက်စရာတွေ ရှိလာနိုင်ကောင်းသော်လည်း တခုခုတော့ လုပ်ပြလိုက်ခြင်းက အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်လာခြင်းပင် ။ ဤအခွင့်အရေးကို ရှေ့ဆက်ပြီး ထိမ်းသိမ်းသွားစေချင်သည်။ စီးပွါးရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အပြီး ယင်းဆွေးနွေးချက်များမှ ပညာရပ်များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ခြင်း မဆောင်ခြင်းမှာ သူတို့ အပိုင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲ အပြီး နိုင်ငံရေးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ရှေ့ဆက်ပြုလုပ်သွားစရာရှိသည်ဟု အသံတွေ ကြားလိုက်ရသည်။ ပဋိပက္ခများရှိရာအရပ်မှာ အဖြေရှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများကို ထာဝစဉ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အလုပ်ရုံကို ပြုလုပ်မည် ဆိုလျှင် ကောင်းသည်ဟု ပထမဦးစွာ လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးပေးချင်သည်။ သို့ သော် ချက်ချင်းလတ်တလော ကြိုဆိုခြင်းတော့ မလုပ်ချင် ။ အကြောင်းမှာ ကြိုဆိုပါသည်ဟု ပြော၍မဆုံးမှီ အဖျားရှူးပြီး ပြသနာတွေ တပုံတခေါင်းနှင့် ဖြစ်နေသော အရာတွေက ရှေ့မှာ တသီတတန်းကြီး ရှိနေခဲ့ပြီ ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ဤကိစ္စကို ဆွေးနွေးလိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဇတ်ခုံတွင် ဇတ်ကောင်များမှာ အစီအရီ ရှိနေကြသည်။ ရှေးဦးစွာ ပြောရမည်ဆိုလျှ င် သမတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ အသိအမှတ် ပြုထားသော အစိုးရတရပ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအုပ်စုမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ကို ချုပ်ကိုင်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အုပ်စုဖြစ်သည်။ တတိယအုပ်စုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဖြစ်သည်။ စတုတ္တအုပ်စုမှာ ပြည်ပမှ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အုပ်စုအသင်းအပင်းများ ဖြစ်သည်။ ယင်းအုပ်စုလေးမျိုးလေးစားမှာ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်စပ်နေ နှီးနှောနေ ရောထွေးယှက်တင်နေ ကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။ သို့ သော် ယင်းလေးအုပ်စုစလုံးသည် တချိန်တည်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ အဖြေရှာခြင်းမျိုးကို ပြုလုပ်၍မရ ။လူများ၍ ပွဲမစည်ဆိုသလို ဖြစ်နေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် လူများ၍ ပွဲမစည်ဆိုသလို ပွဲစည်ရန်လည်း ယခုထက်ထိ မဆောင်ရွက်ခြင်းက ပြသနာဖြစ်နေသည်။ ယခုအချိန်တွင် ရုပ်သေးသမတဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လက်ပွန်းတတီး စကားစမည် ပြောဆိုနိုင် ရီမောနိုင်ခြင်းမှာ ကောင်းသောမြင်ကွင်းတရပ်ဖြစ်သည်။
သို့ သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မင်္ဂလာခရီးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်နှင့် သွားရောက်ခြင်းလားဆိုသည်ကို သမတဦးသိန်းစိန်တို့ ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော မင်္ဂလာခရီးဖြစ်ချင်၍ သမတဦးသိန်းစိန်ကို အကြံပြုချင်လာသည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း ဖြစ်နေသောပဋိပက္ခများကို ရှိနေသည်ဟု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက လက်ခံထားဖို့ လိုနေသည်။ ဤအကြပ်အတည်းကို မည်သို့ ကုစားမည်နည်း ဆိုခြင်းမှာ အဖြေရှာခြင်းဖြင့် နည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရန်လိုသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် တိုက်တွန်းချင်သည်မှာ ပထမဦးစွာ နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု ထင်သည်။ ဤထင်မြင်ချက်ကို တစိုက်မတ်မတ် ကျွန်တော် ပြောနေ ရေးနေ ဆွေးနေ နေဖြစ်သည်။ လက်ရှိပကတိ အနေအထားအရ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထား
သော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်စီမံရမည့် အနေအထား ရှိနေသည်။ တာဝန်ကလည်း ရှိနေသည်။ နိုင်ငံရေးစနစ် အခြေခံမကောင်းသောကြောင့် စီးပွါးရေးချွတ်ချုံကျနေမူကို လောလောလတ်လတ် ဆွေးနွေးပြီးခဲ့ ပြီ ။ စီးပွါးရေးစနစ်ကောင်းမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်နေမည် ဖြစ်သည်ကိုလည်း ခန့် မှန်းနိုင်ကြပြီ ။ သည်တော့ နိုင်ငံရေးစနစ် မကောင်းခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်တို့ မှာ နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပထမဦးစွာ ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ပြောသလို စစ်အစိုးရက တဦးတည်း -လူမျိုး-၁၃၅-မျိုးက အများကြီး ဆိုပြီး ပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အခုအချိန်မှာ ရှိလာမည်မထင် ။ ပြသနာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသည် ပကတိ မျက်မှောက် နိုင်ငံရေးအရ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀- ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း မပြုခြင်း ၊ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပေးခြင်း တို့ မှာ ယင်းဆွေးနွေးပွဲက အကောင်းဆုံး အဖြေထုတ်ရှာနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အပြီးမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ အခြားလွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးပါတီများကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်သွားမည်သာဖြစ်သည်။ တခုတော့ ရှိသည် ။ လွပ်လပ်ပွင့်လင်းသော နိုင်ငံရေးရပ်ကွက်တခုကို ဖန်တီးပေးရန် သို့ မဟုတ် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတော့ သတ္တိ ရှိရန် နှစ်ဖက်စလုံးက ပြုလုပ်ပေးမှ ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ ပြောချင်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီစံနုံး ရရှိစေလိုခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှ အဖြေရရှိခဲ့ ကြပြီဆိုလျှင် အခြားနိုင်ငံတကာရောက် ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစကို ဖန်တီးရန်လိုပါသည်။ သို့ မှသာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုသည်မှာ ခရီးစဉ်များ ချောမွေ့ ပြီး ဖြောင့်ဖြုးသာယာနေပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ တဖက်က နိုင်ငံရေးအရ နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီးချိန် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခပြသနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများက ဆွေးနွေး အဖြေရှာထားကြရန်လည်း လိုအပ်နေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးစီးသော ကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အုပ်စုနှင့် သမတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အရပ်သားအစိုးရ အပါအ၀င် နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်တို့ မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ယခုလက်ရှိ မည်သူက အာဏာလက်ကိုင်ထားသည်ကို မည်သူမျှ ခန့်မှန်း မသိရ၍ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈- ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ပြောရလျှင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို မည်သည့်အချိန်မဆို စစ်တပ်မှ သိမ်းနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဖေါ်ပြထားရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှာလည်း ဤနေရာတွင် မေ့လျော့ထား၍ ရသည့် လူတန်းစားမျိုး မဟုတ်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ နိုင်ငံရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မျိုးကို ပြုလုပ်ချင်သည်ဟု ဆိုကတည်းက နိုင်ငံရေးပြသနာ ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို လက်ခံထား၍ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမှာ အကျဉ်းထောင်ထဲ၌-၂၀၀၀- ကျော်ရှိနေသမျှ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းပြသနာမှာ မည်သည့်အချိန်မျှ ဖြေရှင်း၍ မရ ။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကို ဆောလျင်စွာ လွှတ်ပေးရန်လိုသည်။ သို့ အတူ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် ထိုးစစ်ဆင်နေသမျှ သေနတ်သံမစဲသမျှ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ဘယ်တော့မှ မရ ချေ ။ ထို့ ကြောင့် အမြန်ဆုံး နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ထင်မြင်ယူဆသည်။ သို့ မှသာ နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှသည် ငြိမ်းချမ်းရေးမုဒ်ဦးဆီသို့လှမ်းတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်မိပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/22/20110အကြံပြုခြင်း
အောက်ခြေက ဖားတွေကို အရင်ရိုက်ထုတ်ပစ်
မြန်မာနိုင်ငံ က သတင်းတွေ ဆိုရင်တော့ ပြောမဆုံးပေါင် တော ၃ တောင် ပေါ့ခင်ဗျ... ကလင်းဂါးဗားမန့်ကြီး ဘယ်လိုနေတယ် မသိပါဘူး အောက်ခြေမှာတော့ ဒုံရင်း က ဒုံရင်းပါပဲ...
၀န်ကြီးပြောင်းသွားလို့ ဖားနည်း ယားနည်း လေး ပြောင်းသွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ် ၊ အရင်ဝန်ကြီးက ဖားနည်း တမျိုး နဲ့ အဆင်ပြေနေရင်းက နောက်ဝန်ကြီး တက်လာတော့ ဖားနည်း အသစ်ရှာရတာနဲ့ ညွှန်မှုးတွေ ၊ ဒုညွှန်တွေ ၊ဦးစီး တွေခဗျာ တော်တော်လေးဗျာများသွားလေရဲ့.. ဂါးဗားမန့်ကြီး စလေတော့ တော်တော်လေး လုပ်ကျကိုင်ကျနဲ့ ဒို့များနိုင်ငံတော့တိုးတက်လေပြီပေါ့...
ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဆရာသမားတွေက ၀န်ကြီးသစ်ကို ဘယ်လိုဖားမလဲ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူနေတာကိုး..ဟော.. ခု ငြိမ်သွားကျပြီ.. အထားနပ်သွားပြီ..
ဒီဝန်ကြီး က ဒါပေးရင် ရတယ်..
ဟိုဝန်ကြီးက ဟိုလိုပြောလိုက်ရင် အေးဆေး၊ ကဲ... စပါပြီ...
နိုင်ငံကျော် ပရောဂျက်ကြီး တခု လုပ်ကျမယ်ပေါ့ဗျာ.. အမှန်အကန်တွေ ချပြတယ်ခင်ဗျာ... တကယ်ပါ.. နိုင်ငံတကာစကေးနဲ့ကြည့်မလား ၊ ခုံရုံးဖွဲပြီးစစ်မလား.. တကယ်ပါ .... တကယ်ကို့ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအမီ ရေးဆွဲထားတာပါ...သိန်း ၁၀၀၀ ကျသင့်ပါမယ်လို့ စာရင်းပြပါတယ်.. အမှန်ပါ...
၀န်ကြီးလဲဘယ်နေမလဲ စစ်ပါတယ်ခင်ဗျ... မှန်ပါတယ်.. သိန်း ၁၀၀၀ ကျပါမယ်. အိုကွာ လိုတိုးပိုလျှော့ ရောအင့် သိန်း ၁၁၀၀ ၊
ဟုတ်ကဲ့..တကယ်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာ တကယ်ကောင်းတဲ့ ၀န်ကြီးပါ..
ပရောဂျက်ကြီး ပြီးသွားပါတယ်... ခန်းခန်းနားနားကြီးပါ..
အောက်ခြေမှာတော့ သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်.. အစအဆုံး သိန်း ၄၀၀ လောက်နဲ့ လုပ်ထားတာတွေပါတဲ့ခင်ဗျ..မြန်မာတွေ သိပ်တော်ပါတယ်..
နိုင်ငံတကာမှာ သိန်း ၁၀၀၀ လောက် ကုန်ကျမယ့် ပရော့ဂျက်ကြီး သိန်း ၄၀၀ လောက်နဲ့ အပြီးလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ .. ဘက်ဂျက် စာရင်း တင်တယ်ခင်ဗျ.. သိန်း ၁၁၀၀ ပါတဲ့ခင်ဗျာ... ပရောဂျက် မှာ သုံးလိုက်တာ သိန်း ၄၀၀ ၊ ပြီးသွားတော့ တင်တာ ၁၁၀၀ ၊
သိန်း ၇၀၀ လောက် ခွေးဆွဲသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...ဟုတ်ကဲ့ ခွေး ဘယ်နှစ်ကောင် ပေါင်းဆွဲတယ် မသိပေမယ့် မစားလိုက်ရတဲ့ ခွေးအပေါင်း ၀ိုင်းဟောင်ကျတာပေါ့ခင်ဗျာ..
ဒီမှာတင် ဖြုတ်ထုတ်ရှင်းတွေ စာရင်းတွေ ထွက်လာပြန်တာပေါ့... ဟော နောက်တက်တဲ့သူတွေက ထပ်လုပ်ကျပြန်ရော..
အကျိုးအကြောင်း ကြည့်လိုက်တော့ ပြီးသွား ပရော့ဂျက်တွေ အဆောက်အဦး ဆို ကွာလတီက မကောင်း ၊ ခဏလေးနဲ့ မိုးတွေယို ၊ အုတ်နံရံတွေ အတ် ၊အမိုးတွေ ပြို ၊ လမ်းတွေဆို ၆ လတောင်မခံ...
ကျင်းတွေ ဂလိုင်တွေနဲ့... ကိုယ်တွေ့ ပရောဂျက် တခု အတွက် စာရင်းတင်တာ ၃၆ သိန်း ၊ တကယ်တမ်း လုပ်လိုက်တာ ၂ သိန်း.. တော်လိုက်တာများခင်ဗျာ..
သမ္မတကြီးခင်ဗျာ... ဟိုဟာလုပ်မယ် ဒီဟာလုပ်မယ်အော်နေမယ့်အစား အောက်ခြေက ဖားတွေကို အရင်ရိုက်ထုတ်ပစ်တာက တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ အလွန်တရာမှ အကောင်မွန်ဆုံး၊ အဖြစ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းတခုပါ..နိုင်ငံတော်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ ၀န်ကြီး တွေလူပြောင်းယုံနဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော် ပျက်စီးထားပြီဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးငှါနက မပြောင်းလဲသွားပါဘူးခင်ဗျာ.. ဒီရေ ဒီလှေ နဲ့ ဒီလူတွေပဲ ရှိနေသရွေ့တော့ တိုင်ပြည်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လုံးလဲ မမြင် ပြားပြားလဲ မတွေ့သေးပါဘူး၊
ပရိုက်ဗိတ်ကျောင်းတခုက ၀န်ကြီးငှါနတခုက ၀န်ထမ်းတွေကို အခမဲ့ သင်တန်းတွေ ပေးသတဲ့ ၊ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ငှါနပိုင် မြေလေး သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ချင်လို့ ဂွင်ဆင်တာခဗျ၊ အောင်မယ်.. ငှါန အောက်ကလူတွေကလဲ ကြည်ကြည်သာသာပဲ. ဆရာ ဘာလိုလဲ ဆရာမ ထမင်းစားပြီးပြီလား လောကွတ်တွေ လောကွတ်တွေ ...ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဆရာ၊ဆရာမတွေ အတွက်ပေးတဲ့ အသုံးစာရိတ်တွေ ဘုန်းထားတာကိုး.. အဟတ်ဟတ်... ဒါတောင်နော်.. ဟိုးအောက်က ၀န်ထမ်းလေးတွေ အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ စာရိတ်တွေကို ညွှန်မှုးတွေ က ဘလန့်ချက် မှာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး ဘုန်းတာတွေ မပြောပြတော့ဘူးနော်... သမ္မတကြီးခင်ဗျာ.. အရင်ဆုံး တိုင်ပြည်အတွက် လုပ်သင့်တာလေးများ ဖြစ်မလားလို့ တင်ပြတာပါခင်ဗျာ...
အလွန် ၂၀၀ မှ သန့်ရှင်းလှသော ကလင်းဂါးဗားမန့်ကြီးရဲ့လက်ရှိလည်ပါတ်နေပုံလေး တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့ဗျာ...
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှထဲမှ အရှည်ဆုံးသတင်း အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်..
နေပြည်တော်တွင် သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်နေ့က သမတ ဦးသိန်းစိန်က တက်ရောက်လာသူများကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ မိန်းခွန့်ချွေစကားပြောဆိုခဲ့သည့်အပေါ် လူအများ စိတ်ဝင်စားစွာ ထိုကိစ္စကို ဝေဘန်ပြောကြားနေခဲ့ကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးများသည် အကောင်းမြင်တတ်ကြသူများ၊ အပြုသဘောဆောင်မှုကို လိုလားကြသူများဖြစ်သည်။ အများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး ဘာသာရေးအရ ခွင့်လွှတ်မှု၊ သဘောထားကြီးမှုကို လက်ကိုင်ထားကြသူများဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းတွင် အရေးပါသော အချက် (၃) ချက်ပါဝင်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ အစိုးရသစ်ဖွဲ့ပြီးမှ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင်သည့် တင်းကြပ်သည့် ဥပဒေထွက်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို Skype, Gtalk, VZO နှင့် အင်တာနက် စကားပြော ပရိုဂရမ်များကို အသုံးအပြုရဟု အမိန့်ထုတ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေခွင့်ကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ပြုလုပ်လာခြင်း၊ ပြည်သူ ၅၅ သန်းကျော်အတွက် အစိုးရပိုင်သတင်းစာ ၄ စောင်သာ ထားရှိပြီး လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခွင့် ယခုထက်တိုင် မရှိခြင်း။ လူထု လူတန်းစား ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများ ယနေ့ထက်တိုင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိခြင်းတို့သည်ဦးသိန်းစိန်ကပြည်သူလူထုအားလက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ပြသရမည့်
အလုပ်ဖြစ်သည်။ဒီမိုကရေစီစံနှစ်တွင် ရှိသင့်ရှိအပ်သည်ကို လက်တွေ့လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ထားသူများအနေအနှင့် အပြစ်ဒါဏ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း အပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း မရှိသူများ အနေနှင့် ပြန်လာနိုင်ရန် စဉ်းစားနေကြောင်း ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများအနေနှင့် ပြစ်မှုကို ကျခံရန် ပြန်လာလျှင် အထူးသက်ညှာစွာ စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်သည် “ဘက်လိုက်မှု ရှိသည်ဟုဟုမြင်သည်”။
ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု မည်ကဲ့သို့ အချက်အလက် အထောက်အထားများဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မည်နည်း။ တဖက်တွင်လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်ပိုင်းမှစ၍ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးထားခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ဦးသိန်းစိန်သည် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ လူများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းပြီး အကာအကွယ် ပေးထားသော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာကြသူများကိုမူ ချွင်းချက်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမှာ တရားမျှတမှု မရှိဘဲ တဖက်သတ်ဘက်လိုက်ထားမှု ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ပြင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လူ ၃၀၀၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု (ကျောင်းသားလူငယ်များ အပါအ၀င်)။ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် လူပေါင်း တရာကျော် သတ်ဖြတ်သည့် တရားခံကို တယာက်မှ အရေးယူမခံရခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ထောင်ချခဲ့ခြင်းနှင့် ရာပေါင်းများစွာကို ထောင်သွင်းချထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သူများကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဖြင့် တဖက်သတ် အကာအကွယ်ပေးထားပြီး မိမိယုံကြည်ချက်ဖြင့် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါခဲ့ကြပြီး တိုက်ပွဲင်နေသူများကိုမူ ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါက အရေးယူမယ်၊ သတ်ညှာစွာ စဉ်းစားပေးမယ် ဆိုတာက မျှတမှု မရှိချေ။ ဦးသိန်းစိန်အနေနှင့် ဤအချက်ကို အလေးအနက်ထားပြီး မျှတစွာ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ စဉ်းစားဘို့လိုသည်။
တတိယအချက်အနေနှင့် တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ချမ်းသာကြွဝသော နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဘ၀သို့ ကျရောက်သွားခဲ့ရသည်ကို ၀န်ခံခြင်းသည် အမှန်ကို တင်ပြရဲခြင်း ဖြစ်သော်လည်း စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်များ အာဏာအလွဲသုံးစားမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိချေ။ သူ့အစိုးရသည် မြန်မာပြည်သူများ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို သတိပြုမိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများ စိတ်ချမ်းသာစေရန် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စံနစ်ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပွင်လင်း မြင်သာအောင် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက်ကျေးရွာတွေ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ သဘ၀သယံဇာတပစ္စည်းတွေကို ယှဉ်ပြိုင်သူမရှိ လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို မျှဝေခံစားကြပြီး ခေတ်ပျက်သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေး လက်တဆုတ်စာ ကို သာမန်ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဈေးကွက်ထဲကို ၀င်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအတွက် မျှတတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်ကို ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ချမ်းသာလွန်းနေတဲ့ သူတွေရဲ့ လက်ဝါကြီးအုပ်ထားမှုကို ဥပဒေထုတ် ကန့်သတ်ပြီး သာမန်ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဖွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူ အဖြစ်တောင်းခံခဲ့သော မြန်မာစစ်သံမှူး၊ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ယနေ့အခြေအနေကို သုံးသပ်ထားမှုဟာ စိတ်ဝင်စား လက်ခံနိုင်စရာ ကောင်းပါသည်။ ဦးအောင်လင်းထွဋ်က ယ္ခင်စစ်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၁၇) ဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကို အောင်မြင်မှုကြီး တရပ်အဖြစ် အသားအသား ဖေါ်ပြခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည် သည်တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရးကို ဆောင်ကျဉ်းနိုင်သူများအဖြစ်မော်ကြွားခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီကိုမူတိုင်းဖျက် ပြည်ဖျက်များ အဖြစ် အပုပ်ချခဲ့ပြီးယခု ဦးသိန်းစိန်၏ စစ်ဝတ်ချွတ် အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ ယခင်နည်းဗူဟာကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို တိုင်းပြည်ဖျက်သူများအဖြစ် ပုံဖော်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့နဲ့ သင့်မြတ်နေပါပြီ ဆိုပြီး ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြန်တယ်ဟု ဆိုထားပါသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖက်သတ် ရေးဆွဲ အတည်ပြုထားသော နာဂစ်အခြေခံဥပဒေကိုမူ အဖြစ်ကိုင်စွဲပြီး ဒေါ်အေင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၀၈ ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြထား ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရသစ်မှ ၎င်းတို့နှင့် တိုက်ခိုက်နေကြသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို သားဆိုးများဖြစ်သည်၊ ဖျောင်းဖျယူရမည် ၊ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်သည် ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းနိုင်ဘို့ထက် တမင်သက်သက် ပြဿနာကြီးထွားအောင် ဆွပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါသည်။အုပ်ချုပ်သူတို့က ဖခင်နေရာမှနေ၍ တိုင်းရင်းသားများသည် သားဆိုးများနေရာတွင် ထား၍ပြောကြားခြင်းသည် နှိမ့်ချခြင်းသဘောဖြစ်သည်။ ယ္ခုလုပ်ရပ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့ကြားသပ်လျှို ဖြိုခွဲခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကို စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး တိုက်ကွက်တခု ဖြစ်နိုင်သဖြင့် သတိထားသင့်သည်ဟု မြင်သည်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများကိုလည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်သည် ကတိမျိုးစုံ ပေး၍ လိမ်လည်လှည့်ဖျား ထားခဲ့ကြသည့်အတွက် သံသယ ဖြစ်သည်ကို အပြစ်တင်စရာ မရှိပေ။ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်ပြီးနောက်မှ ယုံယုံကြည်ကြည် လိုက်ကြရန် အထူးလိုအပ်ပေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖွင့်ပေးသော တခါးမှန်သမျှကို တိုးဝင်စူစမ်းရင်း ဟန်ဆောင်မှုလား၊ အမှန် ပြောင်းလဲရန် ပြုလုပ်ခြင်းလား ဆိုသည်ကို ထုထ်ဖေါ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆန္ဒစောပြီး နိုင်ငံရေး ကစားကွက်တွင် ခက်ခက်ခဲခဲပါဝင် ကစားနေကြသည့် ဒေါ်စုကို မပုပ်ခတ်ဘို့ နားလည်မှု ပေး၍ စောင့်ကြည့်ရင်း အားပေးဘို့ အထူးလိုအပ်နေသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျားကွက် မရွေ့ခင် သူက ဘာထင်သည် ငါက ဘာထင်သည်နှင့် ရန်ဖြစ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ မရာက်နိုင်ဘဲ ရှိမည်သာဖြစ်သည်။ ထိ်ု့ကြောင့် ဦးသိန်းစိန်တွင် တကယ်ပြောင်းလဲလို စိတ်ရှိ မရှိ၊ အပေါ်ယံနိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်လိုမှုဖြင့် ကစားခြင်းလော။ တနှင့်တဦကို ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး သွေးကွဲအောင်လုပ်၍ အုပ်ချုပ်ရန် ကြံစည်ခြင်းလော ဆိုသည်တို့ကို ဘက်စုံမှ အကြပ်အတည်းဖြစ်လာတိုင်း ထွက်ပေါ်ရှာသည့် အနေနှင့် ပြုလုပ်တတ်သဖြင့်ဟန်ပြပြောင်းလဲရန် တာစူပြခြင်းလား သိဘို့လိုသည်။
အကယ်၍ ဦးသိန်းစိန်အနေနှင့် ဗိုလ်သန်းရွှေ အရိပ်အောက်မှ အမှန်တကယ် ရုန်းထွက်ပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကိုတည်ထောင်လိုလျှင်သူသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရာမိုစ်(ပြည်သူဘက်ပြောင်းလာသော ဖိလစ်ပိုင်စစ်
ဗိုလ်ချုပ်အမည်) ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ ဗိုလ်သိန်းစိန် အနေနှင့် ၎င်းပြောခဲ့သော ပျားရည်ဆမ်းစကားများသည် အမှန်တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ်နှင့် ပြောကြားခြင်းကြောင်းကို သက်သေပြသည့်အနေနှင့် ပြုလုပ်ရန် အထူးလိုအပ်လှပေသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/22/2011 1 အကြံပြုခြင်း
22 August 2011 Yeyintnge's Diary
မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နူန်းကိစ္စ (ဦးမြင့် )
ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်​ရေး​ လုပ်ငန်း​စဉ် စတင်ပြီဟု ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်​ပြောကြား​
Published on August 22, 2011 by အံ့ဘုန်းမြတ် ·
နိုင်ငံနဲ့​ ပြည်သူလူထုအကျိုး​အတွက် လက်ရှိအစိုး​ရနဲ့​ နှစ်ဘက်ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်​ လုပ်ငန်း​စဉ် စတင်ပြီလို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်​ခေါင်း​ဆောင် ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စု ကြည်က ​ပြောကြား​လိုက်ပါတယ်။
ဒီ​နေ့​ကျင်း​ပတဲ့​ အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု​ဆောင် အစည်း​အ​ဝေး​မှာ ခုလို​ပြောကြား​ တာလို့​ အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုပြန်ကြား​ရေး​အဖွဲ့​ဝင် ဦး​အုန်း​ကြိုင်က ​ပြောပါတယ်။
“သူ့​မှတ်ချက်က အား​ရ​ကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့​ ပြည်သူလူထု အကျိုး​အတွက် ဆက်လက်ပြီး​တော့​ ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်နိ်ုင်မယ့်​ လုပ်ငန်း​စဉ်တခု စပြီလို့​ သူ့​အ​နေနဲ့​ ယုံကြည်တယ်လို့​ သူ​ပြောပါတယ်။ အ​သေး​စိတ် ​ဆွေး​နွေး​တဲ့​အချက်​တွေ​တော့​ ခုချိန်မှာ မ​ပြောနိုင်​သေး​ဘူး​ခင်ဗျ။”
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ဟာ ပြီး​ခဲ့​ရက်ပိုင်း​အတွင်း​ သမ္မတဦး​သိန်း​စိန်နဲ့​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​ ​နွေး​ခဲ့​သလို စီး​ပွား​ရေး​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်မှု ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုး​သား​အဆင့်​ အလုပ် ရုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ တက်​ရောက်ခဲ့​ပြီး​နောက် ခုလိုထုတ်​ဖော်​ပြောကြား​လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ နိုင်ငံ​တော်သမ္မတ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​မှု၊​ စီး​ပွား​ရေး​အလုပ်ရုံ ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ တက်​ရောက်ပြီး​ ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး​တွေ၊​ ပညာရှင်​တွေနဲ့​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ မှု​တွေ ပြုလုပ်ခဲ့​တာကို ကြိုဆို​ထောက်ခံ​ကြောင်း​ ဒီ​နေ့​ထုတ်ပြန်တဲ့​ အဖွဲ့​ချုပ် ​ကြေညာချက် မှာ ​ဖော်ပြပါတယ်။
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ဟာ ပြည်​ထောင်စု အလုပ်သမား​ဝန်ကြီး​ ဦး​အောင်ကြည်နဲ့​ နှစ်ကြိမ် ​တွေ့​ဆုံခဲ့​ဖူး​ပြီး​ ပြည်သူတရပ်လုံး​ရဲ့​ လိုအပ်ချက်ဆန္ဒအတိုင်း​ ဖြည့်​ဆည်း​ပေး​တဲ့​ အ​နေနဲ့​ တိုင်း​ပြည် တည်ငြိမ်​အေး​ချမ်း​ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​အတွက် အစိုး​ရနဲ့​ နှစ်ဖက်လက်တွဲ ​ဆောင်ရွက်သွား​ဖို့​ သ​ဘောတူညီခဲ့​ကြပါတယ်။
Micro ဆိုတာကို “သေးငယ်သော” လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးရှူထောင့်ကနေ ရှုမြင် သုံးသပ်တဲ့အခါ သေးငယ်သော စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်သော ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး သမားများ၊ ၀င်ငွေနည်းပါးသော လူထုလူတန်းစားများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ Finance (ဘဏ္ဍာရေး) ဆိုရာမှာလဲ စီးပွားရေးချေးငွေများ၊ ပညာရေးချေးငွေများ၊ စုဆောင်းငွေများနဲ့ အသေးစာအာမခံ လုပ်ငန်းများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ် ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
Barnes, Carolyn and Keogh , Eric (March 1999) An Assessment of the Impact of Zambuko’s Microenterprise Program in Zimbabwe: Baseline findings. Working Paper. Management Systems International (MSI).
Dunn, Elizabeth. (June 1999) Microfinance Clients in Lima, Peru: Baseline Report for AIMS Core Impact Assessment. University of Missouri-Columbia.
Khandker, Shahid. (2001) Does Micro-finance Really Benefit the Poor? Evidence from Bangladesh, Paper delivered at Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction held by the Asian Development Bank, Manila.
McCulloch, Neil and Bob Baulch. (2000) Simulating the impact of Policy upon Chronic and Transitory Poverty in Rural Pakistan, Journal of Development Studies, 36 (6)
Robinson, Marguerite. (2001) The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor, World Bank. Washington.
အရပ်သုံးဝေါဟာရအရ ပြောရရင်တော့ “စစ်အစိုးရ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ” လို့ ပြောရပေလိမ့်မယ်။ ရထားတဲ့ သတင်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဆိုသူက ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား သူတွေကို ပြန်ခေါ်တဲ့ မိန့်ခွန်းလွှင့်မယ် နားထောင် ကြည့်ပါတဲ့။ ကောင်းလိုက်လေ။ ဟုတ်ပါ့မလား၊ ထုံးစံအတိုင်း တွေးမိလိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နားထောင် ကြည့်သင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နားထောင်လိုက်မိတယ်။ ခဏပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အော် ဒုက္ခပါပဲ။ ထပ်လိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေ ပြန်ပြီလို့ သိလိုက်တယ်။ စကတည်းကလည်းဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပဲလို့ထင်ထားပြီးသားပါ။ အစိုးရသစ်ဟာ စစ်အစိုးရ မဟုတ် တော့ဘဲ အရပ်သားအစိုးရ ဒီမိုကရေနည်းလမ်းတကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့အစိုးရ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေ စီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် တင်ပေးနေတဲ့ အစိုးရ၊ စေ့စပ်ပါတယ်၊ ညှိနှိုင်းပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တွေက မြင်လာအောင်၊ နိုင်ငံရေး အချောင်သမားတွေဆီက ထောက်ခံမှုတွေကိုရပြီး မသိနားမလည်နိုင်သေးတဲ့ အခြေခံပြည်သူလူထုတွေကို လှည့်စားအယုံသွင်းဖို့ ခုလို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာပါ။
ဘယ်လိုအချိန်ကာလမျိုးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံရေး နည်းနည်းပါးပါး နားလည်သူတွေတောာင် သိနိုင် လောက်ပါတယ်။ ရှင်းနေတဲ့အချက်က လိမ်ဖို့ပါ။
ကျနော် ရှေ့ဆောင်းပါးတွေမှာ ရေးပြီးခဲ့ပါပြီ။ တကယ် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တယ်ဆိုရင် အခုအင်အားအရ အ သာစီးရနေတဲ့ တိုင်းပြည် အာဏာကို လုယူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရက တဘက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ပစ်ရမှာပါ။
နိုင်ငံရေးကို အခြေခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်ရမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲမခေါ်ခင်မှာလည်း အထွေထွေလွတ် ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့အဆင့်ကို အရင်လုပ်ပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ တကယ်အရေးပါသူတွေနဲ့ အရံအင်အား အခြေခံ အင်အားတွေအားလုံး ပါဝင်ဆောာင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးရမှာပါ။ ချက်ချင်းလုပ်လို့ ရပါတယ်။
အမိန့်ကြေငြာချက် ချက်ချင်းထုတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ သူတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေးအတွက် လှည့်ကွက်ကလေးတခု (လုပ်နေကျလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီ) ကို စနစ်တကျ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘော တူညီချက် ယူပြီးမှ ဒီမိန့်ခွန်းဆိုတာကို ပြောဆို ထုတ်လွှင့်လိုက်တာပါ။ စစ်အစိုးရလုပ်သမျှ ဘယ်လို အကောင်းပြောရမ လဲလို့ ရှာဖွေနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အချောင်သမားတွေ၊ ရွှေပြည်အေးသမားတွေ၊ လက်နက်ချ အညံ့ခံရေးဝါဒီတွေ၊ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး သက်သက်သမားတွေ အတွက်ကတော့ လှလှပပပြောလို့ ရသွားပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စစ်အစိုးရအကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိသူတွေ၊ ဘာမှ ပြောလို့ဆိုလို့မရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကို ရနိုင်သလောက်ပဲ ချော့ ပြောရမှာပဲလို့ လက်လျှော့ထားလိုက်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေအတွက်လည်း အပြုသဘောဆောင်လာပါပြီ၊ ဒီမိုကရေစီရေးကို ဦးတည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခြေလှမ်းတွေကိုတွေ့ နေရပါပြီ စသဖြင့် ကောင်းသတင်းဖြန့်ဝေဖို့ မီးစိမ်းပြသွားပါပြီ။ သမ္မတဆိုတဲ့ ဦးသိန်းစိန်က ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကာ လက ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ဖြစ်တဲ့ အပျော့ဆွဲ ဒုတိယ ဒေါက်တာမောင်မောင် အဖြစ် ခံယူလိုက်ရပုံပါပဲ။
အလွန် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အပြောတွေကို ဘာအာမခံချက် ဘာဥပဒေကြောင်းနဲ့မှ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားတာ မရှိဘဲ။ လေပိုက်ကွန်တခုကို အမိန့်အရ ပစ်ကြည့်လိုက်တာပါပဲ။
သူတို့ရဲ့ မီးစင်ကြည့်ကရေး မူဝါဒရဲ့ တစိတ်တပိုင်း၊ ပစ်မှတ်ရှာ ပစ်ခတ်ခြင်း (searching fire) ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သလို စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ထာာဝရကျွန်ပြုရေး မဟာဗျူဟာကြီးရဲ့ နည်းပရိယာယ်တခု၊ အချိန်ဆွဲ ချေမှုန်းရေး နည်းပရိယာယ်တခု သက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုထဲက ပညာတတ်ဖောက်ပြန်သူတွေ၊ တတိယလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအချောင် သ မားတွေကို မက်လုံးပေး သွေးခွဲ ထုတ်နေပါပြီ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သက်သက်သမား အသားမနာ တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီး ထင်ပေါ် ကျော်ကြား နေရာယူချင်ကြတဲ့ ပညာတတ်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေကို ဒါ တိုင်းပြည်ကောာင်းအောင် တကယ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ အယုံသွင်း သွေးခွဲစည်းရုံးနေပါပြီ။ ပါလည်းပါနေကြပါပြီ။
တချို့ဒီမိုကရေစီ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသူတွေ ကတောင် ခုဆို အစိုးရက စစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ပဲ အရပ်သားအစိုးရဖြစ်နေပြီ ဆိုတော့ အလားအလာကောင်း ရှိလာ နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေကို ပြောလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလွန်နိုင်ငံရေးဆင်းရဲကြပုံပါပဲ။ ဟုတ်ကော ဟုတ်ပါ သလား။ တကယ်ပဲမသိလို့၊ ယုံကြည်လို့ ပြောနေကြတာလားလို့ စဉ်းစားနေရပါပြီ။
စစ်အစိုးရ အခုလုပ်နေတဲ့နည်းကို လွယ်လွယ်ပြောရရင် အောက်ခြေ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကို ဖိစီးနှိပ်ကွပ်ရေးမူဝါဒကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခိုင်းထားပြီး၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက လိုက် လျှော သယောင်၊ သဘောထားကြီးသယောင်၊ တကယ့်ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးကို ဦးတည်ပြီး စနစ်တကျ တဆင့်ခြင်း လုပ်နေသယောင် အကျဉ်းသား လွှတ်ပြတာ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ပြတာ၊ သတင်းလွတ် လပ်ခွင့်၊ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တချို့ကို အပြောအရ ပေးအပ်လိုက်တာတွေ၊ ပြည်သူလူထု ယုံကြည်ကိုယ်းစားမှုကို ရ ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ကြွယ်၀၀နဲ့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး နိုင်ငံရေး အဆင့်ကို လျှော့ချပစ်တာနဲ့ လူထုထောက်ခံမှုကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သူတို့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ယူသုံးလိုက် တာမျိုးတွေကို လုပ်နေတာတွေပါပဲ။
အလွန် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ ယုတ်ညံ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ လုပ်ရပ်တွေကို သကြားဖုံးထားတဲ့ အပြောအလုပ်တွေကို စနစ်တကျ လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ တချို့အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေဆို စစ်အစိုးရငြိုငြင်မှာစိုးလို့ စကားလုံး အရ တောင်ပြင်း ပြင်းထန်ထန် မသုံးဘဲ အဲဒီလို ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ် စသဖြင့် သာသာထိုးထိုးလေး ပြောဆိုရေးသား နေကြ တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ လူထုဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကိုတောင်မှ တော်လှန်ရေးလို့ နာမည်တပ် မပြောရဲတာ၊ လူထုဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ တော်လှန်ရေး အနုပညာ၊ တော်လှန်ရေး တေး သီချင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပကပါ တလေးတစား သီဆိုဖွင့်လှစ် ထုတ်လွှင့်နေတဲ့
“ကမ္ဘာမကြေဘူး…. ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့ကြတဲ့ မော်ကွန်းတွေ…” လို
တကယ့်ရဲရဲတောက် အားမာန်သတ္တိပေးနေတဲ့ သီချင်းမျိုးကိုတောင် ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်က မသုံးစေချင်လို့ “ကမ္ဘာ မကြေဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးခဲ့ပါဘူးလို့ တချို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတွေက ပြောလာကြတာကိုကြား နေရပါ တယ်။ အလွန်အံ့သြ ထိတ်လန့်စရာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထု ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကြီးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ယုံကြည် ချက်တွေ အဓိဋ္ဌာန်တွေ သစ္စာစကားတွေဟာ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးက ပိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးရဲ့ ယုံကြည်ချက်ပါ။ သစ္စာပါ။ ဒါတွေကို ဘယ်သူ တဦးတယောက်ရဲ့ ဆန္ဒသဘောနဲ့မှ ပယ် ဖျက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ အညံ့ခံ အရှုံးပေးရေး၊ လက်နက်ချရေး၊ စကားလုံးသက်သက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တားဆီး ပိတ်ပင် ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့အလိုဆန္ဒ၊ တောင့်တမှု၊ လိုအပ်မှုတွေကို မထီမဲ့မြင် ပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုး ရကတော့ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်သဘောကျနေမှာပါပဲ။
အပျော့ဆွဲနဲ့ တနိုင်ငံလုံးကို လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ကြွယ်၀၀နဲ့ စစ် လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်းရှင်စနစ်ကြီးကိုတည်ထောင် ပြည်သူလူထုကို ကျွန်ပြုဖို့ကြိုးစားနေသူ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အား ပေးအားမြှောက်ပြုရာရောက်တဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေကို သတိထား ရှောင်ရှားကြဖို့ တော်လှန်ရေးသတိရှိကြဖို့ လို အပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ အကျအဆုံးအခိုက် ရှိစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားပါ။ သင်္ချာဘာသာရပ်မှာ အပေါင်းလက္ခဏာ တွေချည်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနှုတ်လက္ခဏာ၊ အမြှောက်လက္ခဏာ၊ အစား လက္ခဏာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အပေါင်းရှိရင် အနှုတ်ရှိသလို အမြှောက်ရှိရင် အစားလည်းရှိပါတယ်။ ပေါင်းသင့်တဲ့နေရာပေါင်း၊ နှုတ်သင့်တဲ့ နေရာ နှုတ်၊ မြှောက်သင့်တဲ့နေရာ မြှောက်၊ စားသင့်တဲ့နေရာစား လုပ်ပြီးမှသာ ပုစ္ဆာတပုဒ်ကို အဖြေမှန်ရအောင် တွက် ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေခွံလဲ စစ်အစိုးရကတော့ သုံးနေကျ လိမ်လည်လှည့်ဖြားနည်းတွေ၊ ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေ၊ ချော့မော့ မက်လုံးပေး မှုတွေကို အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်တန့်ခိုင်မြဲအောင် လုပ်မြဲ တိုင်းလုပ်နေတာပါပဲ။
ပြည်သူလူထုကို ဘယ်လို စေတနာမျိုးမှ ထားလာတာ မရှိသေးပါဘူး။ ပြည်သူလူထု ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို စာနာ ထောက်ထားပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ခုချိန်ထိ ဘာမှလောက်လောက်လားလား လုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးကိုလည်း မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရဟာ စစ်အစိုးရပါပဲ၊ စစ်ကောင်စီပါပဲ။ လွှတ်တော်ဆိုတာလည်း ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မဆလ လွှတ်တော်ထက် တောင် ဆိုးဝါးတဲ့ စစ်တပ်လွှမ်းမိုး ထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ပါ။
ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အနေနဲ့အရေခွံလဲ စစ်အစိုးရရဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားမှု၊ ကလိန်က ညစ် ကျမှုတွေကို သတိလက်လွတ်မဖြစ်ဖို့ သူတို့ခင်းပေးတဲ့လမ်း၊ သူတို့ လွှဲပေးတဲ့လမ်းအတိုင်း မလျှောက်မိကြဖို့၊ မစီး မမျောမိကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပြည်သူလူထုအားလုံးက လက်မခံရင် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ မလွှဲမသွေ ကျဆုံးရမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ကို သက်တော် စောင့်များ ထားခွင့်မပြုတော့
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ က ရာထူးကနေ အနားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရဲ့အိမ်တော်
ရဲ့လုံခြုံရေး တာဝန်ယူဖို ယခင် တပ် သား ၁၀၀ ကျော် အရာ လေးဦး ပါဝင်တဲ့ လုံခြုံ ရေး တပ်
ခွဲ ကို လက်ရှိ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချူပ် မင်းအောင် လှိုင် ရဲ့အမိန့် အရ ဖယ်ရှား လိုက်
ပြီ လို့သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
ဒီနေ့ တနင်္လာ နေ့ မနက် အစော ပိုင်းမှာ ဖယ် ရှား တာ ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန က
စေလွှတ် တဲ့ တပ် သား လေး ဦး ကတော့ ဆက်လက် တာဝန် ယူ နေဆဲ ဖြစ်တယ် လို့ဆိုပါ
အာဏာလွှဲ ပြောင်း ခြင်း မပြု ခင် ကတည်း က ကျန်းမာ ရေး ချို့ယွင်း နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး
သန်းရွှေ ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ ရေး ကို နောက် ကွယ် က နေ လဲ ကြိုး ကိုင် ထား နိုင် ခြင်း မရှိ တော့
ဘူး လို့သူ့ မိသား စု နဲ့ နီးစပ် တဲ့ အသိုင်း အ၀ိုင်း က FNG ကိုပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ကိုယ်ရံတော် တပ် လို့ခေါ် နိုင်တဲ့ သူ့ ရဲ့လုံခြုံရေး တပ် ကို ဘာ
ကြောင့် ဖယ်ရှား လိုက် ရတာ လဲ ဆိုတာ အသေးစိတ် မသိရ ပေမယ့် ဒီတပ်ကို ယခင် မြန်မာ
စစ်ခေါင်းဆောင် က အသေအချာ လေ့ကျင့် ပေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ 
အမိန့် က လွဲ ရင် ဘယ် အမိန့် မှာ မခံ ယူတဲ့ တပ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် သီတင်းပတ်က မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ၏ အထူးယုံကြည်
စိတ်ချရသူများတွင် ပါဝင်သူများ ဖြစ် သည့် ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် နှင့် ဗိုလ်ချုပ် ခင်ဇော်ဦး တို့ကို
၎င်း တို့၏ ရာထူးများမှ ခေတ္တ အရာ ချထား ကာ အဆိုပါ တာဝန် များ ကို အခြား စစ် အရာ
ရှိ များ နှင့် အစား ထိုး ထား လိုက်သည် ဟု သိရသည်။
ယခု လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များ ကို ဖယ်ရှား ခိုင်းသည် မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ ၏ ဆန္ဒဖြစ်ပုံ မရ
ဟု ခိုင်မာ သော သတင်း ရပ် ကွက် များ က ပြောကြားသည်။
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာ ရှိဖို့လိုအပ်
တနင်္ဂနွေ, 21 သြဂုတ် 2011
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံလာကြပြိး နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲလာမှု အရိပ်အယောင်များ ရှိလာနေပေမယ့် မြန်မာသတင်း မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံလုပ်ကိုင်သင့်သလဲ စတဲ့ အကြောင်းအရာများကို ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်မြင့် ကို ဦးသန်းလွင်ထွန်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို အစိုးရသတင်းစာ နောက်ကျောဖက်မှာ နေ့စဉ်ကြော်ငြာထည့်ပြီး ဆန့်ကျင်လှုံဆော်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်ပေမယ့် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ ပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံဖို့ လိုတယ်လို့ သတင်းမီဒီယာ သုံးသပ်သူတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအားလုံးကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုသလို electronic act ဥပဒေစတဲ့ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်မြင့် က ဗွီအိုအေ ကို ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုး နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတခုကနေ နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကို မဆဲရုံတမယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ပျောက်သွားတာကတော့ ကြိုဆိုသင့်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ သူတို့အနေနဲ့ အရင်တုန်းကလိုမျိုး နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကို ရန်သူလို့ သဘောမထားတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ တကယ်တမ်း ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် မီဒီယာသမားတွေကို အနည်းဆုံး (၂၀) နဲ့ (၃၀) ပတ်ဝန်းကျင်သမားတွေကို အခုအချိန်အထိ ထောင်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေကိုလည်း လွတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တခုက မီဒီယာတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့ ပြည်တွင်းကလူတွေကိုလည်း သူတို့အနေနဲ့ ဘာမှအရေးမယူတာမျိုးတွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင် ဟိုတုန်းကဆိုလိုရှိရင် နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေ ပြောဆိုမိတယ်ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့၊ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြဿနာရှာတာမျုိုးတွေရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ထားပေးမှသာလျှင် မီဒီယာတွေအပေါ်ကို အစိုးရက ပုံမှန်အစိုးရတွေမျိုး ပုံမှန်သဘောမျိုး ထားလာပြီလို ပြောလို့ရမှာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခု ဗမာပြည်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေမှာဆိုရင် အတော်လေးကို လျင်လျင်မြန်မြန်တွေ ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတော့ အစောက ဦးမောင်မောင်မြင့် ပြောခဲ့သလို သတင်းစာတွေမှာ နိုင်ငံရပ်ခြား သတင်းစာတွေကို ပုတ်ခတ်နေတာတွေ ရပ်သွားတယ်။ အဲဒါအပြင်ကို ပြည်တွင်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းလောကသားတွေ အယောက် (၂၀) ထက်မနည်းဘူး။ သူတို့ကို လွတ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တခု တိုးတက်မှုတခုအနေနဲ့ မြင်တာတခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ခေါ်တဲ့အခါ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ သတင်းသွားရောက်ယူခွင့် ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက နိုင်ငံရေးရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ဥပဒေပြု လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိအောင် ပြုပြင်လာတဲ့ ခြေလှမ်းတရပ်လို့ ယူဆလို့ မရဘူးလား။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ အဲဒီလိုတော့ ယူဆချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကတော့ အဲဒီလိုမျိုး ယူဆဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မှန်ပါတယ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းက မီဒီယာသမားတွေကို တော်တော်လေး ကန့်သတ်ပြီး သူတို့နေရာမှာပဲ ကင်မရာကိုတောင် ရွှေ့ လို့မရတဲ့ အနေအထားမျိုးထားပြီး သတင်းယူခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်းပဲ မီဒီယာသမားတွေကို ဖိတ်မယ်လို့ ကြားသိရပေမယ့် ကျနော်တို့ နောက်ထပ်ကြားသိရတဲ့သတင်းကတော့ အဲဒီ မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဧရီယာထဲမှာပဲ နေရမယ်။ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်အဆောက်အဦးထဲမှာပဲ နေရမယ်။ အဲဒီအပြင်ကို ထွက်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ မီဒီယာသမားတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကို လက်နက်မပါတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေထားဖို့ ရည်ရွယ်ကြံဆောင်နေတာကို ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းသာမှန်တယ်ဆိုရင် မီဒီယာသမားတွေရဲ့  လွတ်လပ်ခွင့်ကို ခြင်းတောင်းသေးသေးလေးထဲကနေ ခြင်းတောင်းကြီးကြီးထဲကို ရွှေ့ ပေးလိုက်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်မျိုးလိုပဲ ပြောလိုရပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီရက်ပတ်တွေအတွင်း ထူးခြားမှုတခုအနေနဲ့ တွေ့ရတာက အထူးသဖြင့် The Voice ဂျာနယ်လို ပြည်တွင်းမှာ အပတ်စဉ်ထုတ်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေအနေနဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမတိုင်ခင် သူတို့ရဲ့  အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ သတင်းဦး၊ သတင်းထူးတွေကို ဆင်ဆာမတင်ဘဲ ရေးသားထုတ်ပြန်လာတာမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် သောကြာနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် တွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလို။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ သွားရောက်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးကို တက်တဲ့နေရာမှာ အတိုက်အခံထဲက ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ဦး တက်ရောက်စကားပြောတဲ့အကြောင်း၊ စာတမ်းတင်သွင်းတဲ့အကြောင်း ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကို ထူးထူးခြားခြား ဖော်ပြလာတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ ဒီလို ဖော်ပြနိုင်ခွင့်၊ ဖော်ပြခွင့်ပြုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဒီဟာကတော့ အမှန်ကတော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အခုလိုမျိုး သူတို့အနေနဲ့ ပုံမှန်သတင်းစာတွေမှာ၊ စာရွက်ပေါ်မှာရိုက်တဲ့ သတင်းစာတွေမှာ တင်ခွင့်မရတာတွေကို အခုလိုမျိုး တနည်းတဖုံ အင်တာနက်ကနေ တင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် တင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာပင် အမှန်တကယ် တင်ခွင့်ပေးလို့ တင်ခွင့်ရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် မီဒီယာသမားတွေကိုယ်တိုင် မီဒီယာဥပဒေတွေကို အကဲစမ်းတင်ပြီး အခုလိုမျိုး ဖြစ်လာတာလားဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ The Voice အပါအဝင် စောစောပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းက တော်တော်လေး သတ္တိရှိတဲ့ သတင်းသမားတွေအနေနဲ့က ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် မသာမာတဲ့၊ မသာမှုတွေပါတဲ့ ကိစ္စတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလို တင်ခဲ့တုန်းကလည်း သူတို့အနေနဲ့ တင်ခွင့်ရလို့ တင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အရေးစွန့်ပြီး။ တကယ်ဆို ထောင်နှုတ်ခမ်းနှင်းပြီး တင်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ အခုလည်းပဲ အမှန်တကယ် တင်ခွင့်ပေးလို့ တင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျော့ကွင်းလို့မျိုး ထောင်ထားပြီး မင်းတို့အခုတင်၊ ပြဿနာရှိလို့ရှိရင် နောက်ပိုင်းမှာ ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဆိုရင်တော့ မီဒီယာသမားတွေကို ကျော့ကွင်းထောင်တဲ့ သဘောမျိုးလို့ ယူဆရမှာပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နောက်ဆုံး ဖွဲ့လိုက်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးမှာ။ ဒီလို သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေ ထုတ်ပြီးတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်လာတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက နဝတ၊ နအဖ လက်ထက်တွေမှာလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေ လုပ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ ရပ်သွားတာတွေတော့ ရှိခဲ့တယ်။ အခုနောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအနေနဲ့က ဒီပုံအတိုင်း ဆက်လက်စီးဆင်းသွားမယ်လို့ ယူဆပါသလား။ ဒီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ စောစောပိုင်း အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကိစ္စတွေကို အရင်တုန်းကထက် သွက်သွက်လက်လက် လုပ်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ဆုံးပိုင်းအချိန်အတွင်းမှာတော့ ဒါတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေ ဖြစ်လာတာကလည်း နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးနဲ့လည်း ပတ်သက်ခြင်း ပတ်သက်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးတွေနဲ့လည်း ပတ်သက်ခြင်း ပတ်သက်မယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ အတိအကျ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့ သတိထားမိတာကတော့ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအနေနဲ့ အရင်တုန်းကထက် ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အစဉ်အလာရှိလာမယ်၊ အစဉ်အလာထိန်းလာမယ်၊ အစဉ်အလာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာသတင်း - အထူးသဖြင့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ ဒီလို ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေ၊ ပြောဆိုကြတဲ့အကြောင်းတွေကို တကယ်တမ်း လူထုကြားအောင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးတွေ မရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် တွေ့တဲ့ကိစ္စ။ အစိုးရရဲ့  ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့တဲ့ကိစ္စ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ ပြည်သူလူထုအပေါ်ကို ဒီထက်ပိုပြီးတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနိုင်လို့ရှိရင် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် သတင်းထောက်တွေ၊ သတင်းသမားတွေ မေးမြန်းချက်တွေကို ဒီထက်ပိုပြီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေကြားချက်ပေးဖို့ မသင့်ဘူးလား။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ အခုလောလောဆယ်တော့ မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းဌာနတွေကနေ သတင်းပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကျနော်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဟိုအရင်ဗဟိုသတင်းစဉ်ကနေ လူထုကိုပေးတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုး ဖြစ်နေဆဲပါ။ တကယ်တမ်းသာ လူထုနဲ့ အမှန်တကယ် ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ မီဒီယာတခုကို လိုက်လျောမယ်၊ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းသမားတွေရဲ့  အပြန်အလှန်မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ၊ အင်တာဗျူးမျိုးတွေကို ထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း အရေးကြီးဆုံးက ဖြတ်တောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း၊ သတင်းကိုသတင်းအတိုင်း ထည့်ခွင့်ပြုမှသာလျှင် မီဒီယာ ဟာ တကယ်တမ်းရှင်သန်တဲ့ မီဒီယာတခု၊ လူထုနဲ့ နီးစပ်တဲ့ မီဒီယာတခု၊ အစိုးရအတွက်လည်း အကျိုးရှိတဲ့ မီဒီယာတခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်သတင်းစာဆိုလို့ အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေစဉ်သတင်းစာတွေပဲ ရှိနေသေးတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုလို့ အထိန်းအချုပ်နဲ့ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တွေပဲ ရှိနေတော့ လွတ်လပ်တဲ့ နေစဉ်သတင်းစာတခု၊ သတင်းစာတစောင် ထွက်လာဖို့ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လောက်များ အရေးကြီးနေပြီလဲ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ အခုအချိန်မှာတော့ လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းစာတခု ပြည်တွင်းမှာ အနည်းဆုံးတခုရှိဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ တောက်လျှောက်လည်း အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အကောင်အထည် မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း တဖတ်မှာ ပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း အခုအခါမှာတော့ ပုံနှိပ်ရိုက်တဲ့ထုတ်တဲ့ သတင်းစာတင် မဟုတ်တော့ဘူး။ မီဒီယာကလည်း ပေါင်းစုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သတင်းစာတင်မကဘဲ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုတို့ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာတွေ ပေါ်လာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မီဒီယာပေါင်းစုံဆိုလို့ လူတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး ချိန်ဆက်ပြီးတော့ သတင်းတွေ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ သတင်းမီဒီယာက အင်တာနက်ဖြစ်နေတော့ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင်တော့ တော်တော်လေး ဇာတ်လမ်းရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိုချူံပြောရရင်တော့ အင်တာနက်ကို သူတို့ အတိအကျကို တိတိကျကျ ထိန်းချုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းကတော့ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကို လျှော့ချတဲ့နည်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်မှာ ပြောနေဆိုနေကြတာတွေကို ကြားဖြတ်ပြီး ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို စီစဉ်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း အမြန်နှုန်း လျှော့ချတဲ့နည်းကို သုံးနေပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင် အင်တာနက်ကို ကျနော်တို့ မျှော်လင့်သလောက် လမ်းဖွင့်ပေးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အင်တာနက်ကို တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာကို ဗမာပြည်မှာ အင်တာနက်ရှိတယ်ဆိုတာကို သဘောမျိုးလောက် ပေးနေတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကြားပါတယ် facebook, g-talk တွေကို သုံးလို့ရပေမယ့် တကယ်တမ်း တိတိကျကျ ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် g-talk, facebook တွေ သုံးတာကိုက electronic ဥပဒေနဲ့ ငြိနေပါတယ်။ ထောင်ကျနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့က ဒီကိစ္စကို တကယ်တမ်းသာ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် စောစောကပြောတဲ့ electronic ဥပဒေမျိုးတွေကို ဖြုတ်ပယ်ခြင်းတို့ လျှော့ပေါ့တာတွေ လုပ်ဖို့သင့်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုး မလုပ်ရင်တော့ အင်တာနက် လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေဒီယိုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေဒီယိုတွေမှာဆိုရင် အခု FM stations တွေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာပဲ နယ်တွေနဲ့ မြို့ ကြီးတွေမှာ အလျှိုလျှိုပေါ်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းမှာတော့ အားနည်းနေပြီးတော့ အများအားဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးအပိုင်းတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဒီလို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေဒီယိုတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဒေသတွင်းသတင်း၊ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ ပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ အဲဒါကလည်း နောက်ဆုံး အရင်းစစ်တော့ အမြစ်ကဆိုသလို သူတို့ရဲ့  စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေတွေအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဥပဒေ၊ တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိနေသမျှတော့ ရေဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်တချိန် တီဗွီ ပေါ်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုလက်ရှိ သတင်းစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေက လွတ်လပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့က တကယ့် အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို လျှော့ပေါ့ပေးရပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိအောင် ဖန်တီးပေးရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့က မြန်မာ့မီဒီယာလောကဟာ အခုလိုမျိုးပဲ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်မြင့် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
သဲသဲ | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၃၈ မိနစ်
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ခေါ်ယူသည့်နေ့မှာပင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ၏ မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းမှာ တဒေါ်လာလျှင် ၆၈ဝ ကျပ်သို့ ရုတ်တရက် စံချိန်တင် ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားငွေ
အစိုးရသစ်မှ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကို ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေဆဲတွင် ကျပ် ၇၅ဝ ဝန်းကျင်
ပေါက်ဈေးရှိနေသည့် ဒေါ်လာဈေးမှာ တနင်္လာနေ့တွင် ကျပ် ၇ဝဝ အောက် ကျဆင်းခဲ့ကာ ဆယ်နှစ်အတွင်း အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သွားခြင်းဟု ငွေလဲလှယ်ဌာနများက ဆိုသည်။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်က တဒေါ်လာလျှင် ၉ဝဝ ကျပ် ဝန်းကျင် အထိသာ ကျဆင်းခဲ့ဘူးသည်ဟု ရည်ညွှန်းကြသည်။
“ ဈေးကျနေပေမယ့် ရောင်းတဲ့သူများတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်သူတဦး
ထိုသို့ ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းမှုမှာ မည်သည့်အချိန်တွင် ရပ်မည်ကို ခန့်မှန်း၍ မရနိုင်သေးကြောင်းလည်း စီးပွားရေး ပညာရှင် ဦးခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)က သုံးသပ်သည်။
“အခြေခံတွေ ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ယူဆတယ်၊ အခုက တယောက်ယောက်က ဈေးကစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အခြေခံကိုက ပြောင်းသွားတာပေါ့၊ အဲဒါက ဘယ်မှာ ရပ်မယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး” ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင် ဦးခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ) က ပြောသည်။
၂ဝဝ၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စတင်ကာ တစစ ကျဆင်းလာခဲ့သည့် ပြည်တွင်း ဒေါ်လာဈေးမှာ ဇွန်လ အတွင်း ကျပ် ၇၅ဝ
အထိ ထိုးဆင်းသွားခဲ့ပြီး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဌာနများ၊ ပြည်ပတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများနှင့်
ပြည်တွင်းရှိ FEC လခစားများ ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းခြင်းမှုသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းမှုကြောင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာများ မဖြစ်ရန်
ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းများကို ပို့ကုန်ခွန် မကောက်ခံတော့ဘဲ အမြတ်ခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပေးဆောင်ရန် သြဂုတ်လ
၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန်ကို ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ရာခိုင်နှုန်းသို့ သြဂုတ်လ
၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ခြောက်လတာ လျှော့ပေါ့ပေးရန်လည်း ပါဝင်သည်။
ပို့ကုန်ခွန်များကင်းလွတ်သော်လည်း ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းသည့်ဒဏ်ကို ခံနေရဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်း အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးက ပြောသည်။
“စက်ရုံတွေမှာက အလုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်သမားတွေကို ရှင်းပေးစရာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး
ဖြစ်နေတယ်။ ပိတ်ပစ်လို့ မဖြစ်တော့ ဒီလိုပဲ စခန်းသွားနေကြရတယ်၊ ” ဟု ဦးမြင့်စိုးက ပြောသည်။ ဒေါ်လာဈေး
နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည့် FEC မှာလည်း တယူနစ်လျှင် ကျပ် ၆၂ဝ ပေါက်ဈေးရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းခြင်းမှာ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်လည်း ဆက်နွယ်သည့် အကြောင်းတရပ်
ဟု ဦးခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ) ကဆိုသည်။
“ကမ္ဘာမှာက ရွှေဈေးတက်ရင် ဒေါ်လာက ကျလာတယ်လေ။ အဲဒီအချက်ကလည်း အတိုင်းအတာတခုထိ ပါတာပေါ့” ဟု ဦးခင်မောင်ညိုက ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တက်နေသော်လည်း ဒေါ်လာပေါက်ဈေး ဆက်တိုက် ကျလာသဖြင့် မြန်မာ့ရွှေဈေး ထင်သလောက်
ဈေးမတက်နိုင်ဟု ရွှေဆိုင်များက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်ခန့်တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တအောင်စ (၁ ဒဿမ ၇၆ ကျပ်သား) လျှင် ဒေါ်လာ
၁၈၅ဝ ခန့် ပေါက်ဈေး ရှိနေချိန်တွင် ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်တွင် အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၇ သိန်း အထက်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်လာဈေး ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာသဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ဒေါ်လာ ၁,၈၇ဝ အထိ မြင့်တက်သွာခဲ့သော်လည်း အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားလျှင် ၆၈၈,ဝဝဝ ကျပ်သာ ဈေးဖွင့်ခဲ့သည်။
သမ္မတ၏ စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်က တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည့် ၃ ရက်တာ အမျိုးသား
အဆင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်း “ မြန်မာငွေလဲနှုန်းကိစ္စ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာတမ်း
တင်သွင်း ဖတ်ကြားခဲ့သေးသည်။ လက်ရှိ တရားဝင် ငွေလဲနှုန်းမှာ အမေရိကန် တဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ
လာမည့် အောက်တိုဘာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ပညာရှင်များ
လာရောက် ကာ ငွေလဲနှုန်းများကို ပြုပြင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နည်းလမ်းရှာအကူညီပေးမှာဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ညှိနှိုင်းမယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်ပြော
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ စတင် ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အဖွင့် မိန့်ခွန်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အခုလို ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင် က RFA ကို ပြောပါတယ်။ "ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လိုအပ်တဲ့ တားဆီးမှုတွေ ပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုတခါကျတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပဋိပက္ခ နဲအောင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သူက ပြောပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီတခါ ညင်သာ ပျော့ပြောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။" ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စဟာ လွှတ်တော်နဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် သမ္မတရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ လက်တွေ့မကျ သလို၊ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးမှာ ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအမတ် အများစုက လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လွှတ်တော် အမတ် တချို့က ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဆွေးနွေးပွဲတွေကို သီးခြား ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော် ဥက္ကဌက မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း တခုကို အဆိုပြု တင်သွင်း ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာလည်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ နေ့ခင်း ၁ နာရီမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ဥပဒေ မူကြမ်း တချို့ တင်သွင်းတာတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွှတ်တော် အဖွင့် မိန့်ခွန်းပါ ပြောကြားချက်တွေ အပါအ၀င် ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လွှတ်တော် ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်တွေကို ပါတီ ထောက်ခံ ကြိုဆို
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး သဘောတူခဲ့တာတွေကို NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဒီနေ့သဘောတူ ကြိုဆို ထောက်ခံ လိုက်ပါတယ်။
သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ ပြန်လည် ရှင်းပြ တင်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပါတီပြောခွင့်ရသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထု အတွက် လက်တွေ့ အကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေး သဘောတူညီချက်တွေ ရခဲ့ကြောင်း၊ သဘောတူညီချက်တွေ အများကြီး ရှိရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကိစ္စတွေ ကတော့ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေ ပါဝင်ကြောင်း၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ ထုတ်ပြန် ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ဆွေးနွေး သဘောတူချက်တွေကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ကြိုဆိုတာကို ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ဖတ်ကြားပြပါတယ်။
"နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် မတူကွဲပြားသော အမြင်များ ဘေးဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေမည့် ဗဟိုအကျိုးစီးပွါးများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ပြုခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ သတင်းစဉ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀မ်းမြောက် အားရမှုရှိကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့သို့ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။"
ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ဒီလ ၂၀ ရက်နေ့က တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဖတ်ကြားတဲ့ စာတမ်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စိတ်ဝင်စားပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ရတာကို ကျေနပ် ၀မ်းသာတယ်လို့ တဆက်တည်း ရေးထားပါတယ်။
ကြေငြာချက် နိဂုံးမှာတော့ မြန်မာ့ သတင်းစဉ်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လည်းကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ရှင်းလင်း တင်ပြချက်ကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့က သဘောတူ ကြိုဆိုထောက်ခံတဲ့ အကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေပြည်တော်မှာ ရှိတဲ့ သမ္မတ အိမ်တော်က သမ္မတ ရုံးခန်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒီလ ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ တေမိ ဦးကျော်ဆန်း
Monday, August 22, 2011 zarny win
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေပြည်တော်သို့လာရောက်ပြီး သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသား အဆင့်စီးပွားရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့ရာ အစိုးရ၀န်ကြီးများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာကြိုဆိုခဲ့သော်လည်း ပြန်ကြာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက နှုတ်ဆက်ခြင်လးဝမပြုသည့်အပြင် မျက်စိမျက်နှာပျက်စွာဖြင့် တဦးတည်း နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့မှ နေပြည်တော်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ယင်းနေ့ ညနေ ၄ နာရီ သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်နှင့်သမ္မတရုံးတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာတွင် ပြုလုပ်သည့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
“ဦးကျော်ဆန်းက လုံးဝ စကားလည်းမပြောဘူး။ နှုတ်လည်းမဆက်ဘူး။ ခပ်တည်တည်။ပြီးတော့ မျက်နှာပျက်နေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်ပြီးသဘောမကျသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဦးကျော်ဆန်းလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မလိုလားတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည့် သတင်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မနက် ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်အထိဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက် ခဲ့ပြီးလက်ဖက်ရည်သောက်နားချိန်တွင်အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်အချို့နှင့်အတူ ရယ်မောစွာဖြင့် ရှိနေခဲ့သော်လည်းဦးကျော်ဆန်းသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အတူ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်း အတူမထိုင်ဘဲရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ် နေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးအောင်ကြည်လို ၀န်ကြီးတွေ၊ဦးဇော်ဇော်၊ ဦးဝင်းအောင်တို့လို စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ဒေါက်တာဦးမြင့်၊ပါမောက္ခဒေါ်ရီရီမြင့်တို့လို စီးပွားရေးပညာရှင်တွေအားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ဦးကျော်ဆန်းက ထူးထူးခြားခြားပဲရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်တာတွေ့ရ တယ်။ မျက်နှာကလည်း မကောင်းဘူး” ဟုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည့် ပြန်ကြားရေးအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းသည် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင်သတင်းထောက်တဦး၏ မြစ်ဆုံမေးခွန်းကို ဖြေကြားရင်း မျက်ရည်ကျကာ ငိုကြွေးခဲ့သေးသည်။
“ဦးကျော်ဆန်းကြည့်ရတာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့သာလုပ်နေရတာ။ သူ အတော်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေပုံရတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့ကြားမှာ ဦးသိန်းစိန်နဲ့သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးတို့ကြား၊အစိုးရ၀န်ကြီးတွေကြားထဲမှာ သဘောထားအမြင် တွေကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဦးကျော်ဆန်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ငိုခဲ့တာကလည်း ဒီလိုမတူညီတဲ့အမြင်တွေကြောင့်သူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဖိအား တွေကို မခံနိုင်တဲ့အဆုံး မျက်ရည်အဖြစ်ပေါက်ကွဲထွက်ပြီးငိုတာလို့ ပြောလို့ရတယ်” ဟုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှဗဟိုအလုပ် အမှု ဆောင်တဦးက ပြောသည်။
ဦးကျော်ဆန်းသည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ပြုလုပ်ခဲ့သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်စုကြည်ဟုရင့်သီးစွာခေါ်ဆိုပီး မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သူအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ဦးကျော်ဆန်းသည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊ယာဉ်ကျေးမှုအဖြစ်သာမက နိုင်ငံတော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်အဖွဲ့ ခေါင်းဆာင်အဖြစ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရသည်။
ဒီနေ့မနက် Monday, August 22,4:45 am တွင်ကနေဒါအတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် Jack Layton သည်တိုရန်တို
ရှိသူ၏နေအိမ်တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ၆၁နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားရှာသည်။ကွယ်လွန်ချိန်တွင်ဇနီးဖြစ်သူ ပါလီမန်အမတ်
Olivia Chow ၊ သမီး Sarah နှင့်သားဖြစ်သူ Toronto City councillor Michael Layton ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
New Democratic Party ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ၂၀၀၃ခု မှ ၂၀၁၁ အထိဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၂၅ တွင် ကင်ဆာရောဂါ
အားခုခံရန် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ယခင်က New Democratic Party သည်တတိယမဲအများဆုံးရရှိခဲ့
သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အင်အားကြီးလစ်ဘရယ်ပါတီကိုကျော်ဖြတ်ပြီးလွှတ်တော်တွင်၁၀၃နေရာ(၃၀%)ရယူပြီး ဒုတိယနေရာရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်သည်။လက်ရှိဝန်ကြီးချူပ် Stephen Harper က လွန်စွာကြေကွဲရပါကြောင်းပြောဆို
ခဲ့သည်။ခေါင်းဆောင်များစကားစစ်ထိုးရာတွင် Jack Layton သည်အချက်ကျကျတုံပြန်နိုင်သလို ပါလီမန်တွင်လည်း
ဇနီးဖြစ်သူ Olivia Chow ၏ ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ...
"He passed away peacefully at his home surrounded by family and loved ones. Details of Mr. Layton’s funeral arrangements will be forthcoming."
လူမှုကွန်ယက် Twitter တွင်နောက်ဆုံးသူရေးခဲ့သောစာကြောင်းမှာ...
“Your support and well wishes are so appreciated. Thank you,”
“I will fight this and beat it."
Hull-Aylmer မဲဆန္ဒနယ်မှအမျိုးသမီး MP Nycole Turmel က New Democratic Party ခေါင်းဆောင်အဖြစ်
ပြီးခဲ့သည့်၂ရက်ကအများပြည်သူများသိုနူတ်ဆက်စာတစောင်ရေးပြီး ဇနီးဖြစ်သူ Olivia Chow အားပေးအပ်ထားခဲ့သည်။
Jack Layton's final letter to all Canadians, dated Saturday, Aug. 20, 2011, two days before he died:
We will always miss you Jack . " Peace in heaven"
နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှသည် ငြိမ်းချမ်...
ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်​ရေး​ လုပ်ငန်း​စဉ် စတင်ပြီဟု ​...
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ကို သက်တော် စောင့်များ ထ...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်တွေက...